नेपाली दर्शकलाई जोनको अनुरोध
मुम्बई ०६ चैत । बलिउड अभिनेता जोन अब्राहमले नेपाली दर्शकलाई एक अनुरोध गरेका छन् । जोनले उनको चलचित्र ‘मुम्बई सागा’ हलमा गएर हेरिदिन रिक्वेस्ट गरेका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो पोस्ट गर्दै उनले यस्तो अनुरोध गरेका हुन् ।
जोनले भनेका छन्, “नेपालका सबैलाई मेरो चलचित्र ‘मुम्बई सागा’ गएर हेरिदिन आग्रह गर्दछु । जुन मार्च १९ (भोलि) मा रिलिज हुँदै छ । यो ठूलो पर्दाका लागि बनेको चलचित्र हो । त्यसैले हलमा गएर यो चलचित्र हेरी मनोरञ्जन लिनुहोला । सबैमा मेरो प्रणाम ।”
सञ्जय गुप्ताको निर्देशन रहेको यो एउटा एक्सन क्राइम जनराको चलचित्र हो । जसमा अभिनेता जोन अब्राहम र इमरान हासमी मुख्य भूमिकामा देखिनेछन् । चलचित्रमा जोन अन्डरवर्ल्ड डनको भूमिकामा र इमरान प्रहरी अधिकारीको भूमिकामा देखिनेछन् ।
‘टाइगर–३’ मा पाकिस्तानी आईएसआई एजेन्ट बन्दै इमरान, एक्सनमा सलमानसँग भिड्दै
गौतम बुद्धको यो कुराले १ सेकेण्डमै बनाउने छ तपाईलाई धनी
‘स्मार्ट पुरुष’ कस्तालाई भन्ने ? पुरुषमा के देखेर महिलाहरु आकर्षित हुन्छन् ?
भारतीय चलचित्रको विरासत जोगाउने अभियानमा अमिताभको संघर्ष
कैलालीमा फेरी १ हप्ता निषेधाज्ञा थप्ने तयारी
सुदूरपश्चिम सरकार पुनर्गठनविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
धनगढीमा स्थानीय सरकार मुर्दावाद भन्दै सडकमै रोपाई
मेरै नेतृत्वमा पार्टीलाई सबैभन्दा ठूलो बनाउँछु :सभापति देउवा
महाकाली नदीको सतह बढ्यो, सतर्कता अपनाउन प्रशासन आग्रह